Madaxweynaha Dowladda Puntland oo maanta kusoo wajaan Garoowe. – Radio Daljir
Madaxweynaha Dowladda Puntland oo maanta kusoo wajaan Garoowe.
Seteembar 15, 2016 1:06 b 0
Garoowe, Sep 15 2016--Madaxweynaha dowladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafti uu hogaaminayo oo maalmihii ugu dambeeyey kusgnaa magaalada Muqdisho ayaa saaka kusoo wajahan magaalada Garoowe.
Waftigaani maanta laga dhowrayo magaalada Garoowe ee kasoo kicitimaya Muqdisho ayaa waxa ay ka qaybgaleen shirkii madasha wadatashiga doorashada Soomaaliya ee hogaamiyayaasha Soomaalida shalay Muqdisho ugu soo xirmay.
Shirkii madasha ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga soo saaray qodobo quseeya doorashada Dalka kadhacaysa sanadkaani.
DHEGEYSO-Banaanbax kadhan ah dadka Itoobiyaanka ah oo kadhacay Garoowe.
Ciidanka dowladda iyo Alshabab oo ku dagaalamay deegaanka Muuri ee Sh.hoose.